प्रेम भएको कति समयपछि यौनसम्पर्क उपयुक्त ? - भ्यालेन्टाइन स्पेशल - साप्ताहिक
प्रेम र यौनका विषयमा मानिसहरूबीच फरक–फरक धारणा छन् । कतिपय प्रेम र यौनलाई जोडेर हेर्छन् भने कतिपयले यसलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा अथ्र्याउँछन् तर पछिल्लो समयमा यी दुवै विषयमा खुला बहस हुन थालेका छन् । नेपालमा यस्ता बहस चलिरहँदा विश्वका पहिलो मुलुक भनिने देशमा भने लभ पार्टनर भएको कति समयपछि यौनसम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ भन्ने अध्ययन तथा बहस सुरु भएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह तथा जानकारी दिने डाक्टरइडी डटकम अनलाइनले हालसालै प्रेम जोडीको पहिलो यौनसम्पर्कका बारेमा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अनलाइनले प्रेम जोडी भएको कति पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यस्तो अध्ययन विश्वमै पहिलोपटक भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
सबैमा कौतुहल हुन्छ– प्रेम बसेको कति समय पछि यौनसम्पर्क गर्नु उपयुक्त हो त ? प्रेमिल जोडीले शारीरिक निकटताका लागि कति दिनसम्म पर्खनु उपयुक्त होला ? हुन त प्रेम जोडीमध्ये कुनै एकले यौनसम्पर्कका लागि हतार गरे अर्को पार्टनरले उसको मानसिकता नै विकृत छ भन्ने पनि सोच्न सक्छन् । यदि त्यसो हो भने लामो समय चुप लागेर बस्दा पनि अत्याधिक लजालु भएको शंका गरिन्छ । त्यसैले मायामा रहेको जोडीले पहिलो पटक कस्तो बेला यौनसम्पर्क गर्ने ? डीआइडी डटकमका अनुसन्धानकर्ताहरूले यही प्रश्नलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएका थिए ।
सर्वेमा भाग लिने ५० प्रतिशत युगल जोडीले पहिलोपटक शारीरिक सम्पर्कका लागि नजिकिन एक हप्तादेखि एक महिनासम्म लागेको बताए । उक्त अध्ययनका लागि १ हजार अमेरिकी तथा युरोपेली प्रेमिल जोडीको सहयोग लिइएको थियो भने अध्ययनमा संलग्न २१ प्रतिशत जोडीले आफ्नो पार्टनरसँग पहिलोपटक यौनसम्पर्क राख्न २ देखि ६ महिनासम्म पर्खिएको बताएका थिए ।
सर्वेमा संलग्न विशेषज्ञहरूले यो अध्ययनका क्रममा एउटा रमाइलो तथ्य पनि फेला पारे । त्यो तथ्य के हो भने यौनसम्पर्कका लागि कुरेर बस्नेहरू बढी तनावमा हुन्छन् । किनभने पार्टनरमध्ये एक जनालाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यो अर्कोका लागि गलत पनि लाग्नसक्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
सर्वेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रेमिल जोडीका लागि पहिलो यौनसम्पर्क गर्ने उपयुक्त समय निश्चत हुन्छ कि हँुदैन भन्ने थियो । यो अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले के निचोड निकालेका छन् भने यौनसम्पर्कको पूर्ण अधिकार प्रेमिल जोडीमै निर्भर हुन्छ । हुनसक्छ कतिपय मानिसले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु अघि केही समय लिएर एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्छन् । कोही भने अन्य कुरा विचारै नगरी शारीरिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने स्वभावका हुन्छन् ।
गत वर्ष भएको यौनसम्बन्धी अर्को एउटा अध्ययनमा पनि केही रोचक परिणाम देखिएको थियो । उक्त अध्ययनले विवाह अघि दुई वा दुईभन्दा बढीसँग यौन सम्बन्ध राखेकाहरूको विवाह पछिको सम्बन्ध दह्रो भएको देखाएको थियो । पारिवारिक अध्ययनसम्बन्धी एक अमेरिकी संस्थाको उक्त त्यो अध्ययन–प्रतिवेदन गत मार्चमा सार्वजनिक भएको थियो । अध्ययनमा विवाह अघिनै यौनसम्पर्कको अनुभव बटुलेकाहरूको संख्या उच्च रहेको पाइएको थियो । उक्त अध्ययनले अमेरिकामा विवाह अघि एकजना मात्र यौन साथी भएका महिलाको संख्यामा कमी आइरहेको कुरासमेत देखाएको थियो ।
असार २० देखि २६ गतेसम्मको राशिफल
ब्रेकिङ : क्रिस्टिना गुरुङ ‘प्रेम गीत ३’ को मुख्य अभिनेत्रीमा फाइनल